Ireo Voina Nahazo an’i Shily Nandritra Ny Volana Avrily 2014 · Global Voices teny Malagasy
Ireo Voina Nahazo an'i Shily Nandritra Ny Volana Avrily 2014
MpanoratraMaría Angélica Marín
Nandika (en) i Catherine (Kate) Randall
Voadika ny 18 Avrily 2014 22:42 GMT
Vakio amin'ny teny English, 繁體中文, 简体中文, Español
Voatefatefaky ny voina ny Shiliana nandritra ny volana Avrily 2014. Hovitrovitry ny tanyroa no nandòna tany amin'ny farany avaratra (Arica sy Iquique) ary fahamaizan'ala goavana no nandrava ny tanànan'i Valparaiso. Amin'ireo tranga ireo dia goavana tokoa ny fahasimbana sy ny isan'ny niharam-boina.
Saripikan'ny mpisera Flickr retoricaca. (CC BY-NC 2.0)
Fanevan'ny tanàna izany havoanan'i Valparaiso izany. Mahatonga an'i Valparaiso hanintona ara-pizahantany ny harevaky ny loko, ny maritrano ary ny karazan-javatra hafa ao aminy. Nanjary nisy fonenana niorinorim-poana ireo havoanan'ny faritra noho ny fitomboan'ny mponina, fa tsy ampy ny toerana hanorenana. Ny ankamaroan'ireo fonenana dia vita avy amin'ny akora maivana, ka tahaka izay efa nitranga taloha, dia ireny no lasa mora arehitry ny afo. Tamin'ity indray mitoraka ity, dia ny toetr'andro no tena nitana anjara toerana lehibe tamin'ny fielezan'ny afo.
Tonga avy hatrany tamin'ny alalan'ny endrika sakafo, kojakoja ilaina andavanandro ary fandraisana anjaran'ny mpanolotena ny fanampiana avy amin'ny eo amin'ny firenena sy iraisampirenena. Mpanolotena an'arivony no nameno an'i i Valparaiso ka nahatonga ny Ben'ny tanana sy ireo manampahefana ao amin'ny tanàna nilaza fa tsy tokony hisy mpanolotena hafa intsony hizotra hankany amin'ny tanàna. Nifanosona tamin'ny fanalana ny fako ny hamaroan'ny mpanolotena ka niteraka olana ara-pifamoivoizana goavana any amin'ireo faritra tra-boina (ireo havoanan'i Cerro Mariposa, El Vergel, La Cruz, Cerro El Litre, Cerro Las Cañas, Cerro Miguel Ángel y Mercedes), ary tsy zakan'ny tambajotram-pikarakarana ny fahasalamana ao an-tanàna ny filàna avy amin'ireo olona maro loatra [es]:
Mankasitraka ny fanentanana ho amin'ny fanampiana izahay, saingy tsy maintsy miteny amin'ny mpanolotena izay an-dalana ho aty Valparaiso izahay fa tsy ho azo tanterahina ny handray sy hikarakara ny rehetra. Tsy misy amin'izao fotoana izao ny rafitra ara-pahasalamana eto aminay ary tsy misy jiro ny faritra sasany.
Mitatitra [es] ny haba-tranonkala EMOL fa “nanambara ny fametrahana fanairana ara-pahasalamana amin'ny faritra iray manontolo ny Minisiteran'ny Fahasalamana, Helia Molina.” Nanambara ny fikasana hampanaovana vakisiny ny ankizy sy ny olon-dehibe ihany koa i Molina mba hialana amin'ny aretina azo sorohina toy ny sery (ho an'ireo manam-pialofana), tetanosy (ho an'ireo vondron'olona mety ho mora tratrany toy ny mpamono afo, ny mpiasan'ny fiadidiana ny tanàna, ary ireo mpanolotena miasa amin'ny fanesorana ny poti-javatra vokatry ny voina), ary “meningite” (ho an'ireo vondron'olona mety ho mora tratran'izany ao amin'ny faritra).
Ao anatin'izany rehetra izany, mampiaiky volana sy manome aingam-panahy ny mahita ireo olona mandositra ny afo tsy mitondra na inona na inona afa-tsy ny akanjony eny am-babena, mandao ireo fananana azo tanatin'ny fiezahana fatratra, ary manomboka manadio ny faritra sy hanangana indray ny tranony ao anatin'ny fahavononana tanteraka. Ary ny tena mahafinaritra dia ny mahita ireo olona efa kely fidiram-bola manome tanana ireo very fananana manontolo.
Mandritra izany fotoana izany, tsy mitsahatra ny tonga any amin'ireo toera-panangonana azy, sy ireo fialofana vonjimaika ny fanampiana ka zarain-dry zareo indray hatramin'ny nisian'ny voina, ary efa an-dalana ihany koa ny drafi-pananganana indray ny tanàna, araka izay porofoin'ny hafatra Twitter:
Hikarakara drafitra hananganana indray an'i Valparaiso ny Governemanta Shiliana taorian'ny afo.
Nanambara ny Filohan'i Shily fa hanampy ireo very trano sy fananana tamin'ny hai-trano tao Valparaiso.
Ny Vatsy azo avy amin'ireo lalao [basketball] roa ireo dia halefa mivantaana amin'ireo tra-boinan'ny hai-trano tao Valparaiso.
10 ora izayVenezoela
7 andro izayEl Salvador